Burma Partnership » Human Rights and Burma Election 2010
By Human Rights Defenders and Promoters • December 30, 2010
This Election analytical report of Human Rights Defenders and Promoters (HRDP) examines Burma’s 2010 election under three periods of time, pre election, election day and post election.
The report provides statistics of voters and detailsavariety of different Electoral violation committed throughout the county – including vote buying, intimidations, violations of election laws in the process of advanced voting, proxy voting, vote counting and other violation of polling station officials during the Election Day. It claims that violations were committed by means of well-allocated fund and abuse of authority. Some important flaws highlighted in the report are the lack of public’s access to vote counting, repeated voting (voting more than one time).
လူ့အခွင့်အရး ကာကွယ်မြှင့်တင်သူများကွန်ယက် (HRDP) မှထုတ်ပြန်လိုက်သော ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာသုံးသပ်ရေး အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၁၀ မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲကို ကာလသုံးပိုင်းခွဲကာ စစ်ဆေးသုံးသပ်ထားသည်။
အစီရင်ခံစာထဲတွင် မဲပေးသူများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို ဖေါ်ပြထားပြီး မဲဝယ်မှုများ၊ အကြပ်ကိုင်ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ ကြိုတင်မဲမသမာမှုများ၊ ကိုယ်စားမဲများ၊ မဲရေတွက်မှုမသမာမှုများ အပါအဝင် မဲရုံမှူးများ၏ ဘက်လိုက်မှုများကို အသေးစိတ်ဥပမာများဖြင့် ရှင်းလင်းဖေါ်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကို ငွေကြေးနှင့် အာဏာသုံးကာ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တင်ပြထားသည်။ အစီရင်ခံစာထဲတွင် မီးမောင်းထိုးဖေါ်ပြထားသည့် အခြားအရေးကြီးသည့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မှားယွင်းပျက်ကွက်မှုများမှာ ပြည်သူလူထုရှေ့မောက်တွင် မဲရေတွက်မှု မရှိခြင်း၊ တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဆန္ဒမဲပေးခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Download the report in Burmese here.
Tags: 2010 Elections, Human Rights, Human Rights Defenders and Promoters, Political Parties, SPDC, Union Solidarity and Development Party
This post is in: 2010 Elections, Uncategorized